बस्ने काठमाडौं, ठेगाना गाउँ: रिपोर्टबिना काठमाडौंका घरभेटीले घरमा छिर्न दिएनन् - Image Khabar
बस्ने काठमाडौं, ठेगाना गाउँ: रिपोर्टबिना काठमाडौंका घरभेटीले घरमा छिर्न दिएनन्
प्रकाशित मिति : 1 July, 2020 6:47 am
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको प्रेस ब्रिफिङ सुन्दा लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोनाको जोखिम छ र ? तर, सडकमा सवारीसाधनको जाम छ। पैदल यात्रुको उस्तै चाप छ ।
काठमाडौं भित्रिनेहरू कोरोना परीक्षण गर्न आतुर देखिन्छन् । तर, उनीहरूले परीक्षण गर्दा भर्ने फारममा भने बसोबास रहेको ठेगाना खुलाउँदैनन् ।
उनीहरूको प्रवृत्ति छ, बसोबास राजधानीको, ठेगाना जन्मस्थानको। यो प्रवृत्तिले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पदाधिकारी तनावमा देखिन्छन् ।
‘आत्मीयता रहने हुनाले जन्मथलोको मायाले हो वा आफ्नो परिचय लुकाउनका लागि हो । त्यो थाहा भएन’, महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘तर, वास्तविक ठेगाना उल्लेख नगर्दा हामीलाई संक्रमित खोज्नै हैरान हुने गर्छ।’
कोरोना ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ । देशभरका २२ वटा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती प्रयोगशालामा दैनिक ४ देखि ७ हजारसम्म स्वाब नमुना परीक्षण हुन्छ।
काठमाडौंमा डेरामा आउनेलाई घरभेटीले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट ल्याउन दबाब दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बाहिरबाट आएका व्यक्ति मापदण्डबमोजिम दुई सातासम्म क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रमाण छ र कोरोनासम्बन्धी लक्षण छैन भने पीसीआर नगरी घर पठाउन मिल्छ ।
तर, डेरावालहरू रिपोर्टका लागि टेकु अस्पतालमा दैनिक औसत ८ सय जनाको भीड लाग्ने गरेको छ। रिपोर्टबिना घरभेटीले घरमा छिर्न नदिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको डा. गौतम बताउँछन् ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि : पम्प व्यवसायीलाई करिब ३० लाख नाफा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १० दिनभित्रै दोस्रोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । यसपटक व्यवसायीलाई
किन चलेनन् सार्वजनिक सवारी साधन ?
काठमाडौं । यातायात ब्यवसायीले सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।सरकारले विहीबार आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी
मास्क नलगाई बाहिर निस्के ‘ठाउँको ठाउँ’ सय रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । मास्क नलगाई हिँड्नेलाई प्रहरीले ठाउँको ठाउँ एक सय रुपैयाँ जरिवाना गराउने भएको छ
काठमाडौं । निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय नगरे आन्दोलनमा
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि ५ करोडको सुरक्षा उपकरण किन्ने ठेक्का रद्द
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीका लागि खरिद गर्न खोजेको इएलटिई र्‍यापिङ कम्युनिकेशन सिस्टम ठेक्का रद्द
अभियुक्तले अख्तियारको हिरासत खचाखच, लकडाउन अवधिमा २७ जना पक्राउ